သူမ LIVE VIDEO နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပွဲကြမ်း လိုက်တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် - Tha Dinn Oo
ပရိသတ်ကြီး MRTV-4 ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ် ရင်ထဲတိုးဝင်ကာ အခိုင်အမာနေရာယူထားပြီး ဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာလေးနဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောပိုးကြာဖြူခင်ကိုတော့ မသိသူမရှိသလောက်ပါပဲနော်..။အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းရပ်တည်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးသူမဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိကာကျော့ရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေအပြင် အေးချမ်းပြီးချစ်စရာအပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့လည်း အချစ်ပိုစေသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအမြဲ အလွမ်းလေးတွေ ပြေစေတဲ့ ဆိုင်းမိုင်ကတော့ သူမရဲ့နာမည်နဲ့ Live Video တွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လိမ်လည်နေသူတွေကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရပါတယ်နော်..။သူမရဲ့နာမည်နဲ့ Live Video တွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အသုံးချလိမ်ညာနေကြတဲ့ အဆိုပါ Page အတုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မင်းသမီးချောလေးပိုးကြာဖြူခင်ကာ ဒီကနေ့လေးမှာပဲ သူမရဲ့ Fb စာမျက်နှာကနေ သတိပေးစကားလေး ဆိုလာပါတယ်နော်..။
“ကျွန်မ ပိုးကြာဖြူခင် Poe Kyar Phyu Khin သည် ယခု ပိုစ့်ကို တင်သော page တစ်ခုထဲကိုသာ အမှန်တကယ် သုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည် page အတုများဖြင့် ကျွန်မလွှင့်ခဲ့သော live များကို တဆင့်ပြန်လည်ကူးယူခိုးချ ပြန်လွှင့်ပြီး လိမ်စားနေသော page များသည် ကျွန်မနှင့် မည် သို့မှ မသက်ဆိုင်ပါ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့ page နာမည် မှန်မမှန် live အတုအစစ် သေချာခွဲခြားကြည့်ပြီး မှ အားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်
ဆိုင်းမိုင် (ခ) ပိုးကြာဖြူခင်
၅၊၁၊၂၀၂၁..” ဆိုပြီး သူမက ရေးသား ပြောပြကာ သတိပေးစကားလေး ဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
အဲ့ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်မှာ ဆိုင်းမိုင်လေးက “Live အတုတွေ ကို rp ထုပေးကြပါနော်..” ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောထားပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောကာ အားပေးဝန်းရံကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်း ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
Photo Credit – Poe Kyar Phyu Khin’s Fb Page
ပရိသတ်တွေ ဝေဖန်တာခံနေရပြန်တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ ကြော်ညာ ဗီဒိယို
ယုန်လေးကိုတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေသိကြမှာဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိထားသူပါ။ ယုန်လေးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဖန်တီးမှုအသစ်တွေအတွက် ကြိုးပမ်းနေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်လုပ်လေ့ရှိသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ယုန်လေးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရပြန်ပါပြီ။ မကြာခင်အချိနိကလဲ “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” သီးချင်းနဲ့ အားလုံးဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ MI Star ဖိနပ်ကြောညာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ညာမှာ မိန်းကလေးရဲ့ ရင်သားကို အသားပေးပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ “အားလုံး စိတ်ညစ်နေကျချိန် ကောင်းမလား ? အိမ်ထဲ နေနေရတဲ့ အချိန် ဆိုကောင်းမလား ? အပျော် သဘော ကြည့်ပေးပါ” ဆိုပြီး ဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ယုန်လေးရဲ့ ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးကိုဖော်ပြပေးလိူက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလဲ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး အမြင်လေးတွေပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Video ကြည့်ရန် Swelsone […]
ကြန္​ ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္​ တြင္​ quarantine ဝင္​ သူ ထိုင္ ​းႏိုင္​ငံျပန္​ႏွ စ္​ ဦး ထြက္​​ေျပးလြတ္​​ေျမာက္​​ေန ဆဲျဖစ္
ကြန္​ ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္​ တြင္​ quarantine ဝင္​ သူ ထိုင္ ​းႏိုင္​ငံျပန္​ႏွ စ္​ ဦး ထြက္​​ေျပးလြတ္​​ေျမာက္​​ေန ဆဲျဖစ္ ခမ္​း သား​ေငါဝ္​း ႐ွမ္​းျပည္​န ယ္​ ​ေတာင္​ပိုင္​း လိြဳင္​လင္​ခ႐ိုင္​၊ လြိဳင္​လင္​ၿမိဳ႕နယ္​ ကြန္​ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္​ ​quarantine စင္တာတြင္​ ထိုင္း​ႏိုင္​ငံမွျပန္​လာသူ ႏွစ္​ဦးထြက္​​ေျပးလြတ္​​ေျမာက္​​ေနဆဲျဖစ္​ေၾကာင္း ​​ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားထံ ​​​​ဇူလိုင္လ ၉ ရက္​​ေန႔ကသိရသည္​။ ထြက္​​ေျပးသြားသည္​့ quarantine ဝင္​သူကို တာဝန္​႐ွိသူထံအ​ေၾကာင္​းၾကားထားၿပီး ခုခ်ိန္​ထိထြက္​​ေျပးသူသည္​ quarantine centerတြင္​ျပန္​မ​ေရာက္​​ေသး​ေၾကာင္​းသိရသည္​။ “ထြက္​​ေျပးသူကျပန္​မလာဘူးဘဲခုခ်ိန္​ထိ၊ ​ေထြအုပ္​ကိုလည္​းသတင္​းပို႔ထားတယ္​၊ ရဲကိုလည္​းသတင္​းပို႔ထားတယ္​ ​ထြက​​္​​ေျပးတဲ့ ​ေန႔ကတည္​းကသတင္​းပို႔တာ သူတို႔ဘယ္​လိုလုပ္​တာလဲမသိဘူး´´ဟု quarantine center လံုျခံဳ​ေရး​ေစာင္​့​ေပးသည္​့ အရန္​မီးတပ္​ တစ္​ဦးက​ေျပာသည္​။ ထိုကိစၥ နဲ႔ပတ္​သက္​ၿပီး လြိဳင္​လင္​ၿမိဳ႕နယ္​ ရဲတပ္​ဖြဲ႔ထံဆက္​သြယ္​​ေမးျမန္​းရာတြင္​ “ဒီကိစၥ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ဆီမွာ […]
အားရပါရဝုန်းပါမယ့် မိုးလေဝသ သတိပေးချက်
နေပြည်တော် မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း မိုးနည်းရပ်ဝန်းကြီး ယနေ့ ၃ရက်နေ့မှာ အားရပါရဝုန်းပါမယ် မုန့်ကျွေးကြဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် 3/08/2020 at 5:55am (MMT) SU SU SAN ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအလွန်ကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပါသည်။ ရန်ကုန်မှ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်‌​လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက် မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဒေသအလိုက် မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ အမြင်တာ ။ (၄)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် မိုင်ဝက်ခန့်။ ရေပြင်လေ။ အနောက် (သို့) အနောက်တောင်၊ တစ်နာရီပင်လယ်မိုင် (၁၅-၂၀)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ […]